Xisbiga Kulmiye Oo Soo bandhigay Shuruudaha laga Rabo Cidda isu soo taagaysa Kuraasta ugu sarraysa xisbigaasi
Hargeysa(Mandheeranews)-Guddida qaban-qaabada shirweynaha Afraad ee xisbiga KULMIYE, ayaa shaaciyey shuruudaha laga doonayo inay soo buuxiyaan xubin kasta oo danaynaysa inay kamid noqoto hoggaanka xisbiga ugu sarreeya.
2. Xubinta u tartamaysa guddoomiyaha iyo ku-xigeennada xisbigu waa inaanu ahayn xubin mar intuu ka baxay xisbiga, haddana kusoo noqday.
3. Mussharrixinta guddoomiyaha iyo ku xigeenka u tartamaysaa waa inay labadii sannadood ee ugu dambeeyey dalka deggenaayeen oo ay joogeen.
5. Xubin kasta oo u tartamaysa, guddoomiye-ku-xigeennada koowaad, labaad, saddexaad iyo afraad, waa inay bixiyaan 86000,000 (Lix iyo siddeetan milyan) oo Somaliland shilin ah oo aan soo celin lahayn.
6. lacagtaasi waa in lagu bixiyaa ugu dambayn bisha September (sagaalaad) shanteeda, wixii faahfaahin ahna waxa lagala xidhiidhayaa guddida qaban-qaabada shirweynaha Afraad ee xisbiga KULMIYE.
7. Murarrashaxu waa inuu soo gudbiyaa codsigiisa oo qoraal ah iyo jagaqada uu u sharraxan yahay.
8. Murashaxu waa inuu soo gudbiyaa warqaddiisa dambi la’aanta iyo tiisa caafimaadka.